Madaxii Al-shabaab u qaabilsanaa Qaraxyada ee Gobolka Shabeellada Dhexe oo la Dilay | Aftahan News
Madaxii Al-shabaab u qaabilsanaa Qaraxyada ee Gobolka Shabeellada Dhexe oo la Dilay
Muqdisho (Aftahannews) – Taliyaha Guutada 3-aad Qeybta 27-aad ee ciidanka xoogga Soomaaliya gaashaanle Sare Abshir Maxamuud Maxamed Shitaqeey ayaa sheegay in Howlgal lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab.
Ciidanka Xoogga Soomaaliya ayaa howlgalkan ka fuliyay inta u dhexeeysa Jowhar iyo Balcad, halkaas oo dhawaan ay ku dhinteen 17 qof oo shacab ah oo ay miino kula kacday iyagoo la socday gaari ay ku safrayeen.
Al-shabaab ayaa weeraro jidgal ah ku qaada kolonyada ciidamada, waxayna sidoo kale miinooyin ku aasaan wadada hareeraheeda, iyagoo la beegsada ciidamada halkaas mara. Balse mararka qaar waxay khasaare kasoo gaadhaa dadka shacabka ah ee wadadaas ku safra.
Dowladda federalka Soomaaliya ayaa hadda dib u dhis ku wada wadada Muqdisho iyo Jowhar, waxaana ammaankeeda sugaya ciidamada Haramcad.